MABASA AVAPOSTORI – 2hove
musha / Bhaibheri / MABASA AVAPOSTORI
The MABASA AVAPOSTORI kuonekwa muzvitsauko vari subpages papeji rino. Vane zvakanaka “slugs” se /bible/acts/ch-1. (Tiri panenge pakati pechitsauko kupinda kupatsanura zvitsauko sezvo 11-28 akazviratidzazve Ch 11.) zvisinei, bhuku rose rinotaurwa pazasi, wo.
1:1 zvechokwadi, O Theophilus, Ini akanyora hurukuro yokutanga zvose Jesu akatanga kuita uye kudzidzisa,
1:2 achirayiridza vapositori, waakanga asarudza kubudikidza noMweya Mutsvene, kunyange kusvikira zuva raakakwidzwa akakwidzwa.
1:3 Naiyewo akazvipa mupenyu kwavari, pashure Passion ake, Akaonekwa navo mazuva makumi mana uye akataura nezvoumambo hwaMwari pamwe elucidations zhinji.
1:4 Uye achidya navo, akavarayira kuti varege kubva muJerusarema, asi kuti vanofanira kumirira Promise raBaba, "Pamusoro amakanzwa," akati, "Kubva mumuromo mangu.
1:5 For John, chaizvo, akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene, kwete mazuva mazhinji kubva ikozvino. "
1:6 saka, vaya vakanga vakaungana vakamubvunza, vachiti, "Ishe, ndiyo ichi nguva apo iwe achadzorera umambo hwaIsraeri?"
1:7 Asi iye akati kwavari: "Hazvisi zvenyu kuti muzive nezvenguva kana nguva, iyo nesimba rake Baba.
1:8 Asi muchagamuchira simba, Mweya Mutsvene, unopfuura pamusoro pako, uye imi muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose nomuSamariya, uye kusvikira kumigumo yenyika. "
1:9 Zvino wakati areva zvinhu izvi, pavakanga vakatarira, akanga kusimudzwa, uye gore akamutora kubva pameso avo.
1:10 Uye apo ivo vakamucherekedza achikwira kudenga, tarira, varume vaviri vakamira pedyo navo nguvo chena.
1:11 Vakati: "Varume veGarirea, makamirirei pano akatarisa kudenga? This Jesu, uyo unobviswa kwamuri achikwidzwa kudenga, vachadzoka chete saizvozvo kuti makavaona achikwira kudenga. "
1:12 Zvino vakadzokera kuJerusarema vachibva pagomo, unonzi reMiorivhi, riri pedyo neJerusarema, mukati reSabata rwendo.
1:13 Vakati vapinda cenacle, vakakwira kunzvimbo Petro naJohani, James naAndirea, Firipi naTomasi, Bhatoromeo naMateo, James waArifiasi naSimoni muZeroti, uye Judha waJakobho, kwokugara.
1:14 izvi zvose vakanga kupfuurira nemoyo umwe mumunyengetero nevakadzi, uye Mary, amai vaJesu, uye nehama dzake.
1:15 Mumazuva iwayo, Peter, wakasimuka pakati pehama, akati (zvino vazhinji varume zvachose rakanga vanenge zana nemakumi maviri):
1:16 "Hama Noble, Rugwaro anofanira kuzadziswa, iyo Mutsvene rakafanotaura nemuromo waDhavhidhi pamusoro paJudhasi, uyo aiva mutungamiri evaya mokumusunga Jesu.
1:17 Akanga averengerwa pakati pedu, iye akasarudzwa nomujenya ushumiri uhwu.
1:18 Uye murume uyu zvechokwadi akagarwa munda kubva mubairo vezvakaipa, uye saka, ndapera akasungirirwa, Iye ukaputika pakati uye ake ose nhengo dzomukati akadurura.
1:19 Zvino izvi zvikazikamwa kune vose vagere Jerusarema, zvokuti munda uyu wakanzi mumutauro wavo, Akeridhama, ndiko, 'Munda Weropa.'
1:20 Nokuti zvakanyorwa mubhuku reMapisarema: 'Rega hwavo ugaro dongo uye anogona kuva nomunhu anogara mukati maro,'Uye' umwe ngaatore remabhishopu rakatanga yake. '
1:21 saka, zvakafanira kuti, varume ava vanga vaungana nesu munyika yose nguva iyo Ishe Jesu aipinda nokubuda pakati pedu,
1:22 kutanga parubhabhatidzo rwaJohwani, kusvikira zuva apo raakakwidzwa kudenga achibva kwatiri, mumwe izvi kuitwa chapupu pamwe nesu chekumuka kwake. "
1:23 Zvino vakamisa vaviri: Joseph, ainzi Bhasabhasi, wakatumidzwawo Jusito, uye Matthias.
1:24 uye achinyengetera, vakati: "May iwe, O Ishe, uyo anoziva mwoyo nomumwe, zvinoratidza ndoupi ava wamasarudza,
1:25 kutora nzvimbo youshumiri uhwu nokuva muapostora, kubva izvo Judhasi prevaricated, kuti aende panzvimbo yake pachake. "
1:26 Uye vakakanda mijenya pamusoro pavo, uye mujenya ukawira pana Matiasi. Akaverengwa pamwe nevaapositori vanegumi neumwe.
2:1 Zvino mazuva wePendekosti apera, vose vakanga vari panzvimbo imwe chete.
2:2 uye pakarepo, kwakauya mutinhiro kubva kudenga, rakaita mhepo pedyo nechisimba, uye rukazadza imba yose mavakanga vagere.
2:3 Zvino kwakaonekwa kwavari ndimi vakaparadzana, dzakafanana nedzomoto, izvo vakagara pamusoro mumwe nomumwe wavo.
2:4 Zvino vakazadzwa vose neMweya Mutsvene. Uye vakatanga kutaura nendimi dzakasiyana-siyana, sezvo Mutsvene akapa achitsetsenura kwavari.
2:5 Zvino kwaiva nevaJudha kugara muJerusarema, Varume vaitya Mwari vaibva kundudzi dzose zviri pasi pedenga.
2:6 Uye ruzha urwu parwakaitika, vazhinji vakaungana uye akanga avhiringidza mupfungwa, nekuti mumwe nomumwe akanga achiteerera kwavari vachitaura nomutauro wake.
2:7 Ipapo vose vakashamisika, uye vakashamiswa, vachiti: "Tarirai, havasi vose vari kutaura ava vaGarirea?
2:8 Uye sei kuti isu vakanzwa kuti mumwe nomumwe wavo mumutauro wedu, umo isu takaberekwa?
2:9 VaPatio uye vaMedhia navaEramu, uye vaya vanogara Mesopotamia, Judhiya uye Kapadhokiya, NePontasi uye Asia,
2:10 Firigia nePamufiria, Ijipiti uye nhengo Libya dziri kumativi Kurini, uye vatsva evaRoma,
2:11 Saizvozvowo, vaJudha uye vatsva, VaKrete uye navaArabhu: takanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. "
2:12 Uye vose vakakatyamadzwa, uye vakashamiswa, vachiti: "Asi izvi zvinorevei?"
2:13 Asi vamwe nenzira yokunyomba akati, "Varume ava dzizere newaini itsva."
2:14 asi Petro, amire nevanegumi neumwe, wakasimudza inzwi rake, uye akataura navo: "Varume yeJudhiya, uye vose vaya vari kugara muJerusarema, ichi ngachizikamwe kwamuri, ukarerekera nzeve dzako mashoko angu.
2:15 Nokuti varume ava havana vakadhakwa, sezvo imi ngatiti, nokuti iawa rechitatu rezuva.
2:16 Asi ichi ndicho zvakataurwa kubudikidza nomuprofita Joere:
2:17 'Izvi zvinofanira kuva: mumazuva okupedzisira, ndizvo zvinotaura Ishe, Ndichadurura, kubva Mweya wangu, pamusoro penyama yose. Uye vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaporofita. Uye vechiduku enyu achaona zviratidzo, navakuru venyu vacharota hope.
2:18 uye zvechokwadi, pamusoro pavanhu vangu nevakadzi varanda mumazuva iwayo, Ndichadurura kubva Mweya wangu, uye vachaporofita.
2:19 Uye ndichaita ndiunganidzire zvishamiso kudenga kumusoro, nezviratidzo panyika pasi: ropa nomoto uye mhute youtsi.
2:20 Zuva richashanduka rima, mwedzi uchashanduka ropa, pamberi guru uye pachena zuva raShe rinosvika.
2:21 Uye ichi chichava: ani nani kudana zita raIshe uchaponeswa. '
2:22 Varume veIsraeri, inzwai mashoko awa: Jesu weNazareta ndiye munhu yasimbiswa naMwari pakati penyu kubudikidza nezvishamiso uye nezviratidzo kuti Mwari kuburikidza naye pakati penyu, sezvo imi vanozivawo.
2:23 uyu, pasi zvachose kuronga uye nokufanoziva kwaMwari, wanunurwa nemaoko kururama, anotambudzika, uye kuurayiwa.
2:24 Uye uyo akamutswa naMwari kumusoro akavhuna Mabote, nokuti zvirokwazvo zvakanga zvisingabviri kuti iye asungwa naro.
2:25 Nokuti Dhavhidhi akati nezvake: 'Ndaiona Ishe nguva dzose pamberi pangu, nokuti ari kuruoko rwangu rworudyi, kuti ndirege kuzununguswa.
2:26 Nokuda kwaizvozvi, mwoyo wangu unofara, uye rurimi wangu rwakafarisisa. Uyezve, Nyama yanguvo netariro.
2:27 Nokuti hamungasiyi kusiya mweya wangu kuGehena, uyewo hamuzobvumiri Mutsvene wenyu kuti aone kuora.
2:28 Makaita kuti ndizive nzira dzoupenyu. Uchava chose kuzadza ndifare nokuda chenyu. '
2:29 Noble hama, ndibvumirei kuti nditaure pachena kwamuri pamusoro Patriarch David: nokuti zvapfuura uye akavigwa, uye guva rake riri pakati pedu, kunyange kusvikira zuva rino.
2:30 saka, aiva muporofita, nokuti aiziva kuti Mwari akanga apikira nemhiko kwaari pamusoro wechiuno chake, pamusoro uyo aizova pachigaro chake choumambo.
2:31 Achifanoona izvi, akanga achitaura pamusoro Kumuka kwaKristu. Nokuti kana akasiya Muhero, uyewo nyama yake kuona kuora.
2:32 This Jesu, Mwari akamutsa zvakare, uye ichi tiri zvapupu zvose.
2:33 saka, muchiratidza akakwidziridzwa kuruoko rworudyi rwaMwari, agamuchira kuna Baba chivimbiso cheMweya Mutsvene, akadurura izvi panze, sezvo imi ikozvino kuona uye kunzwa.
2:34 Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga. Asi iye pachake akati: 'Ishe akati kuna Ishe wangu: Gara kuruoko rwangu rworudyi,
2:35 kusvikira ndaita vavengi vako chitsiko. '
2:36 saka, dai imba yose yaIsraeri ngaizive zvechokwadi kuti Mwari akaita kuti Jesu uyu chete, wamakaroverera pamuchinjikwa, zvose Ishe naKristu. "
2:37 Zvino vakati vanzwa zvinhu izvi, vakanga wakaputsika mwoyo, uye vakati kuna Petro nevamwe vaApostora: "Tinofanira kuitei, kuhanzvadzi?"
2:38 Asi zvechokwadi, Petro akati kwavari: "Itai sakaremende; uye ubhabhatidzwe, mumwe nomumwe wenyu, muzita raJesu Kristu, nokuti kuregererwa kwezvivi zvenyu. Uye muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene.
2:39 Nokuti Promise ndechenyu navanakomana vako, uye vose vari kure kure: nokuti wakatsaurwa naJehovha Mwari wedu ndakadana. "
2:40 Ndokuzo, nemamwe mashoko mazhinji kwazvo, akapupura akavakurudzira, vachiti, "Muzviponese parudzi urwu vakaipa."
2:41 saka, vaya vakagamuchira hurukuro yake vakabhabhatidzwa. Uye mweya inenge zviuru zvitatu yakawedzerwa nomusi.
2:42 Zvino vakanga kutsungirira nedzidziso hweVaapositori, uye kugoverana pakumedura chingwa, uye minyengetero.
2:43 Uye kutya mune mweya yose. wo, zvishamiso zvizhinji nezviratidzo zvakaitwa nevaApostora muJerusarema. Uye pakanga guru ashamiswe wose.
2:44 Zvino vose vaiva pamwe, uye vakabata zvose zvinhu zvakafanana.
2:45 Vakanga vachitengesa zvinhu zvavo uye zvavo, uye unogovera navo vose, sezvo chero vakanga vachida.
2:46 wo, vakaramba, mazuva ose, kuva umwe mutemberi uye kumedura chingwa pakati dzimba; uye vakadya zvokudya zvavo nemufaro nemoyo wakachena,
2:47 vachirumbidza Mwari zvikuru, uye vakabata nyasha nevanhu vose. Uye mazuva ose, Ishe akawedzera avo vakanga vachiponeswa pakati pavo.
3:1 Zvino Petro naJohwani vakakwira kutembere paawa yechipfumbamwe yomunyengetero.
3:2 Uye mumwe murume, waiva chirema kubva mudumbu ramai vake, akanga akatakurwa ari. Vangadai vandomuradzika zuva rimwe nerimwe pamusuwo wetembere, unonzi Wakanaka, kuti kukumbira zvipo kune vaya vaipinda mutemberi.
3:3 Uye murume uyu, kana aona Petro naJohani kutanga kupinda mutemberi, akanga achipemha, kuti chipo.
3:4 Ipapo Petro naJohani, akanyatsomutarira naye, akati, "Titarire."
3:5 Zvino akanyatsovatarira, tichitarisira kuti kugamuchira chinhu kwavari.
3:6 Asi Petro akati: "Sirivha negoridhe hazvisi zvangu. Asi chandinacho, Ndinokupai. Muzita raJesu Kristu weNazareta, simuka ufambe. "
3:7 Akamuburusa noruoko rworudyi, Iye akamusimudza. Uye pakarepo makumbo ake netsoka dzakasimbiswa.
3:8 Zvino akauruka, akamira ndokufamba achipoterera. Uye akapinda navo mutemberi, achifamba uye achisvetukasvetuka, achirumbidza Mwari.
3:9 Uye vanhu vose vakamuona achifamba, nekurumbidza Mwari.
3:10 Vakamuziva, kuti iye ndiye uya akanga agere chipo pamukova Wakanaka pasuo retemberi. Uye vakazadzwa nokutya uye nekukatyamara nezvakange zvaitika kwaari.
3:11 ndokubva, sezvo akanga achakabatirira pana Petro naJohani, vanhu vose vakamhanyira kwavari pane pabiravira, unonzi raSoromoni, achishamisika.
3:12 asi Petro, achiona izvi, akapindura kuvanhu: "Varume veIsraeri, Seiko kushamisika ichi? Kana nei ndinototsvaka kwatiri, sokunge nesimba kana simba redu kuti isu akaita murume uyu kuti afambe?
3:13 Mwari waAbhurahamu, naMwari waIsaka, uye naMwari waJakobho, Mwari wamadzibaba edu, wakudza Mwanakomana wake Jesu, wamakaroverera, chaizvo, mumaoko uye wakaramba pamberi paPirato, paakanga achipa mutongo kumusunungura.
3:14 Zvino iwe makaramba Mutsvene Just One, uye akakumbira kuti murume kuponda apiwe kwamuri.
3:15 Zvirokwazvo, zvakanga muvambi Life wauri kuurayiwa, iye Mwari waakamutsa kuvakafa, uyo tiri zvapupu.
3:16 Uye nokutenda muzita rake, murume uyu, vamusina kuona uye kuriziva, dzakatsigira zita rake. Uye nokutenda kubudikidza naye akapa murume uyu zvakakwana utano pamberi penyu mose.
3:17 Saka zvino, hama, Ndinoziva kuti wakaita ichi nokusaziva, sezvo vatungamiri venyu vakaita.
3:18 Asi nenzira iyi Mwari akazadzika saizvozvo zvinhu zvaakanga akazivisa achishandisa muromo Vaprofita vose: kuti Kristu wake aizotambura.
3:19 saka, tendeukai mudzoke, kuti zvivi zvenyu zvidzimwe kure.
3:20 Ndokuzo, kana nguva kunyaradzwa achange chakasvika pamberi paJehovha, achatuma Uyo chakafanotaurwa kwamuri, Jesu Kristu,
3:21 uyo zvechokwadi denga atore, kusvikira panguva kudzorerwa zvose, Mwari akataura nomuromo wavaporofita vake vatsvene, kubvira kare kare.
3:22 chaizvo, Moses akati: 'Nokuti Ishe Mwari wenyu achakumutsirai Muporofita kwamuri kubva kuhama dzako, mumwe akafanana neni; chete ukateerera maererano nezvose zvose kuti anofanira kutaura nemi.
3:23 Uye ichi chichava: mweya umwe neumwe ucharega kuteerera muporofita uyo anofanira vatsakatiswe kubva kuvanhu. '
3:24 Uye vaprofita vose vakataura, kubva Samuel uye zvadaro, vakagara vaparidzawo zvemazuva awa.
3:25 Imi muri vana vevaporofita uye resungano iyo Mwari akagadza madzibaba edu, achiti kuna Abrahamu: 'Uye vana vako vose apanyika acharopafadzwa.'
3:26 Mwari amutsa Mwanakomana wake uye kumutuma kwamuri imi kutanga, kuti akuropafadzei, kuti mumwe nomumwe anogona kutendeuka amene pazvakaipa zvake. "
4:1 Asi vachiri kutaura navanhu, vapristi wedzimhosva kwetemberi uye nevaSadhusi rakafukidza navo,
4:2 vakashungurudzika kuti vakanga vachidzidzisa vanhu uye achiparidza muna Jesu nekumuka kubva kuvakafa.
4:3 Zvino vakaisa maoko pamusoro pavo, uye ivo akavaisa pasi rwavarindi kusvikira mangwana. Nokuti akange atova madekwani.
4:4 Asi vazhinji vakanzwa shoko vakatenda. Uye uwandu hwevarume zviuru zvishanu.
4:5 Zvino fume mangwana vatungamiri vavo vakuru nevanyori vakaungana muJerusarema,
4:6 kusanganisira Anasi, mupristi mukuru, uye Kayafasi, naJohani naArekizanda, uye vazhinji vaiva vemhuri yomuprista.
4:7 Uye kumira vari pakati, Ivo akavabvunza: "By chii simba, kana chine zita, Makaita izvi?"
4:8 Ipapo Petro, azadzwa neMweya Mutsvene, akati kwavari: "Vatungamiriri vevanhu uye nevakuru, teerera.
4:9 Kana isu nhasi tiri ichizotongwa chinhu chakanaka kuitirwa munhu ndonda, iro rave kuporeswa,
4:10 zivai kuti mose uye vose vaIsraeri, kuti muzita raShe wedu Jesu Kristu weNazareta, wamakaroverera pamuchinjikwa, Mwari waakamutsa kubva kuvakafa, naye, murume uyu amire pamberi penyu, utano.
4:11 Ndiye dombo, yakarambwa nemi, vavaki, razova musoro wekona.
4:12 Uye hakuna ruponeso kune umwezve. Nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa kuvanhu, iyo zvakafanira kuti tikwanise kuponeswa. "
4:13 ndokubva, vachiona kugara Petro naJohani, wakati zvinosimbiswa kuti vaiva varume pasina tsamba kana kudzidza, vakashamiswa. Ivo vakaziva kuti vaiva naJesu.
4:14 wo, vachiona murume akanga aporeswa amire navo, vakanga vasingakwanisi kutaura kuti kuzvipikisa navo.
4:15 Asi vakavarayira kuti vabve panze, kure kanzuru, ivo vakasara pakati pavo,
4:16 vachiti: "Tichaita seiko navarume ava? Nokuti zvirokwazvo chiratidzo paruzhinji zvaitwa kuburikidza navo, pamberi vose vagere Jerusarema. Zviri pachena, uye hatigoni kuzviramba.
4:17 Asi zvimwe pakanyenga mberi pakati pavanhu, ngativayambirei varege kuzotaurazve nezita iri munhu. "
4:18 Uye kudana navo, havana akavayambira kutaura kana kutongodzidzisa muzita raJesu.
4:19 Asi zvechokwadi, Petro naJohani ati kwavari: "Tongai kana chete pamberi paMwari kuti titeerere imi, kwete Mwari.
4:20 Nokuti hatigoni kurega kutaura zvinhu zvatakaona nekunzwa. "
4:21 asi ivo, kutyisidzira kwavo, akavaendesa, musina kuwana nzira kuti achavaranga nemhaka vanhu. Nokuti vose vakarumbidza zvinhu zvaitwa zviitiko izvi.
4:22 Nekuti munhu uyo ​​chiratidzo ichi ane mushonga zvaitwa aiva makore anopfuura makumi mana okuberekwa.
4:23 ndokubva, kuva asunungurwa, vakaenda kwavo, uye vakaudza zvakakwana chii vatungamiri vapristi vakuru nevakuru zvavakange vataura kwavari.
4:24 Vakati vanzwa izvozvo, nemoyo umwe, vakasimudzira inzwi kuna Mwari, uye vakati: "Ishe, ndimi Iye akasika denga nepasi, gungwa uye nezvose zviri mazviri,
4:25 ani, neMweya Mutsvene, nemuromo baba vedu David, wenyu, akati: 'Nei vaHedheni kwave Vachiita, uye nei vanhu vanga kufungisisa mashokonhando?
4:26 Madzimambo enyika akasimuka, uye vatungamiriri vakabatana pamwe chete, kuzorwa naIshe uye noMuzodziwa Wake. '
4:27 Nokuti zvirokwazvo Herodhe naPondiyo Pirato, pamwe nevahedheni, nevanhu vekwaIsraeri, pamwe chete guta rino pamusoro renyu dzvene muranda waJesu, wamakazodza
4:28 kuita ruoko rwako zano vazvisunga raizoitwa.
4:29 Saka zvino, O Ishe, tarirai kutyisidzira kwavo, mupe varanda venyu kuti vataure shoko renyu nokushinga zvose,
4:30 paakaitira ruoko rwenyu muna nokuporesa uye zviratidzo nezvishamiso, kuitwa kubudikidza nezita reMwanakomana wenyu mutsvene, Jesu. "
4:31 Uye vakati vanyengetera, nzvimbo yavakanga vakaungana rikashamiswa. Zvino vakazadzwa vose neMweya Mutsvene. Uye vakanga vachitaura shoko raMwari nechivimbo.
4:32 Ipapo vazhinji vatendi vaiva nemoyo umwe uye mweya chete. Hakuna aiti chimwe chezvaaiva kuti ndechake vaiva rake, asi zvinhu zvose zvavo vose.
4:33 Uye nesimba guru, vapositori vakanga vanoita uchapupu Kumuka kwaJesu Kristu Ishe wedu. Nenyasha huru dzikava mavari zvose.
4:34 Uye kunyange munhu pakati pavo vanoshayiwa. Nokuti vazhinji vaiva varidzi minda kana dzimba, vachitengesa izvi, vaiuya yacho zvinhu vakanga vachitengesa,
4:35 uye vakanga akaisa pamberi petsoka kuvaapositori. Zvino yakakamurwa mumwe nomumwe, sezvaakanga vanoda.
4:36 Now Joseph, uyo Vaapostora Bhanabhasi (iro rinoshandurudzwa sezvo 'mwanakomana kunyaradzwa'), waiva muRevhi weSaipuresi dzinza,
4:37 sezvo akanga nyika, akaitengesera, uye iye vakauisa uye akaisa izvi patsoka kuvaapositori.
5:1 Asi umwe murume wainzi Ananiasi, nomudzimai wake Safira, akatengesa munda,
5:2 uye akanga anonyengera pamusoro mutengo weminda, pamwe nomudzimai wake mvumo. Uye kuunza chete chikamu, rikadziisa patsoka kuvaapositori.
5:3 Asi Petro akati: "Ananiasi, nei Satani paakaedza mwoyo wako, kuitira kuti nhema kuMweya Mutsvene uye anonyengera pamusoro mutengo wenyika?
5:4 Wanga zvisiri paunenge zvabatwa nayo? Wakati wakatengesa, yakanga isiri musimba renyu? Seiko izvi chinhu mumoyo mako? Hauna kureva nhema kuvanhu, asi kuna Mwari!"
5:5 Zvino Ananiasi, pamusoro kunzwa mashoko aya, akawira pasi akabva afa. Uye kutya kukuru yakafukidza vose vakazvinzwa.
5:6 Zvino majaya vakasimuka uye amubvisa; uye akatakura naye kunze, vakamuviga.
5:7 Zvadaro pamusoro kwemaawa matatu akapfuura, uye mudzimai wake akapinda, asingazivi zvakanga zvaitika.
5:8 Zvino Petro akati kwaari, "Ndiudze, mukadzi, kana matengesa munda kuti mari iyi?"Akati, "Ehe, nokuti yaizvozvo. "
5:9 Zvino Petro akati kwaari: "Seiko kupindirana kuidza Mweya waIshe? tarirai, tsoka dzevaviga murume wako dziri pamukova, uye vanofanira newewo!"
5:10 pakarepo, akawira pasi pamberi petsoka dzake, akabudisa mweya. Ipapo majaya akapinda uye akamuwana afa. Akamutakura akaenda naye kunze uye tevere murume akamuviga.
5:11 Uye kutya kukuru kwakabata yose Church uye pamusoro pevose vakanzwa zvinhu izvi.
5:12 Uye kuburikidza nemaoko evaapositori kwakaitwa zviratidzo nezvishamiso zvakaitwa pakati pavanhu. Uye vose vakasangana pamwe chete panguva pabiravira raSoromoni.
5:13 Uye pakati vamwe, hapana akamboda hwokubatana navo. Asi vanhu vaivakudza.
5:14 Zvino vazhinji varume nevakadzi vaitenda munaShe akanga achiwedzera,
5:15 zvokuti vakaisa ndonda mumigwagwa, achiisa pamibhedha uye stretchers, kuti, Petro paakasvika, Kanenge mumvuri wake angawa pamusoro mumwe wavo, anofanira uye vangadai vasunungurwa pazvifo zvavo.
5:16 Asi vazhinji uyewo akakurumidza kuJerusarema vachibva kumaguta pedyo, vakatakura vairwara nevaya nemweya yetsvina, vakaporeswa vose.
5:17 Zvadaro mupristi mukuru nevaya vose vaiva naye, ndiko, ari weNzira revaSadhusi, vakasimuka uye vakazadzwa negodo.
5:18 Zvino vakaisa maoko vapositori, uye ivo akavaisa mutirongo revanhu.
5:19 Asi usiku, mutumwa waShe wakazarura mikova yetirongo akavabudisa, vachiti,
5:20 "Endai, munoudza pamavazhe etemberi, kutaura kuvanhu mashoko ose aya upenyu. "
5:21 Vakati vanzwa izvi, vakapinda mutemberi chiedza pakutanga, uye vakanga vachidzidzisa. Zvadaro mupristi mukuru, uye vaya vakanga vanaye, akaswedera, uye vakaunganidza dare remakurukota uye vakuru vose vevanakomana vaIsraeri. Vakatuma kujeri kuti vaunzwe.
5:22 Asi kana vashandi vakanga vasvika, uye, pamusoro kuvhura mujeri, akanga asina kuvawana, vakadzokera vakandoti kwavari,
5:23 vachiti: "Tawana jeri zvirokwazvo Akapfigira nesimba zvose, uye varindi vakamira pamberi pamukova. Asi pamusoro rokuizarura, hatina kuwana munhu mukati. "
5:24 ndokubva, kana wedzimhosva temberi nevapristi vakuru vakati vanzwa mashoko iwayo, vakanga vasina chokwadi nazvo, kuti chii chinofanira kuitika.
5:25 Asi mumwe munhu akasvika, akavaudza, "Tarirai, Varume vamakaisa akaisa mutirongo vari mutemberi, vamire vachidzidzisa vanhu. "
5:26 Ipapo wedzimhosva, pamwe nevashandi, akaenda navo pasina simba. Nokuti vakanga vachitya vanhu, varege namabwe.
5:27 Vakati vauya navapostori, vakamira pamberi pedare remakurukota. Mupristi mukuru akavabvunzurudza,
5:28 akati: "Zvatinorayira zvakasimba kuti murege kudzidzisa muzita iri. nokuti tarisai, mazadza Jerusarema nedzidziso yenyu, uye uchida kuunza ropa romunhu uyu pamusoro pedu. "
5:29 Asi Petro vaApostora akapindura achiti: "Zvinokosha kuteerera Mwari, kupfuura vanhu.
5:30 The Mwari wemadzibaba edu wakamutsa Jesu kuvakafa, wawakauraya kuurayiwa naye pamuti.
5:31 Ndiye uyo Mwari akakwidziridza kuruoko rwake rworudyi soMutongi uye Muponesi, kuti ape kutendeuka nokuregererwa kwezvivi kuvaIsraeri.
5:32 Uye isu tiri zvapupu zvezvinhu izvi, neMweya Mutsvene, Mwari waakapa kuna vose vanomuteerera. "
5:33 Vakati vanzwa zvinhu izvi, vakanga vakakuvadzwa zvikuru, uye vakanga vachironga akavauraya.
5:34 Asi mumwe padare remakurukota, muFarisi wainzi Gamarieri, mudzidzisi wemurairo, waikudzwa nevanhu vose, vakasimuka uye akarayira vanhu kuti vabudiswe zvishoma.
5:35 Akati kwavari: "Varume veIsraeri, unofanira kungwarira vavariro dzako pamusoro varume ava.
5:36 Nokuti asati mazuva ano, Theudas akaswedera, arikuti amene kuva munhu, uye varume, vanenge mazana mana, akabatana naye. Akaurayiwa, uye vose vakanga vatenda kwaari vakaparadzirwa, uye vava chinhu.
5:37 Shure kwaizvozvo mumwe, Judhasi weGarirea yakatowedzera mberi, mumazuva ose okuverengwa, akatsaukira vanhu vakatarira pachake. Asi iyewo wakaparara, uye vose, vazhinji vakanga vanaye vakabatana, vakapararira.
5:38 Naizvozvo ikozvino, Ndinoti kwamuri, Sudurukai kuvanhu ava, muvarege. Nokuti kana zano iri kana basa iri kuvanhu, richaputswa.
5:39 Asi zvechokwadi, kana zviri zvaMwari, hamungambovi kukwanisa kuiputsa, uye zvichida unogona kuwanikwe vakarwa Mwari. "Uye vakabvuma naye.
5:40 Uye anodana vapositori, wakati kurohwa navo, havana akavayambira kutaura muzita raJesu. Ivo akaendisa navo.
5:41 uye zvirokwazvo, vakabuda pamberi pedare, vachifara kuti vakafanirwa vaiona vakafanirwa nokutambudzika paakatsvinyira nokuda kwezita raJesu.
5:42 Uye mazuva ose, mutemberi uye pakati dzimba, havana kumborega kudzidzisa evhangeri Kristu Jesu.
6:1 Mumazuva iwayo, sezvo nhamba vadzidzi kuwedzera, kwakava kunyunyuta vaGiriki akanangana nevaHebheru, nekuti chirikadzi dzavo dzakanga kubatwa kushora nezuva kushumira.
6:2 Uye saka gumi, achidana pamwe nechaunga chevadzidzi, akati: "Hazvina kunaka kuti isu kusiya Shoko raMwari kushumira patafura uyewo.
6:3 saka, hama, tsvakai pakati penyu varume vanomwe kupupurirwa zvakanaka, azadzwa neMweya Mutsvene, uye nouchenjeri, vatingaisa pamusoro basa iri.
6:4 Asi zvechokwadi, tichava nguva mumunyengetero uye muushumiri cheShoko. "
6:5 Zvino zano rikafadza chaunga chose. Uye vakasarudza Sitefano, murume uzere nokutenda uye noMweya Mutsvene, naFiripi naProkoro naNikanori naTimoni, naPamenasi uye Nicolas, mumwe nokusvika itsva vachibva kuAndiyoki.
6:6 Ava vakati pamberi pamberi hweVaapositori, uye anonyengetera, ivo vakaisa maoko pamusoro pavo.
6:7 Uye Shoko raShe rakanga kuwedzera, uye nhamba yevadzidzi hukapamhidzira muJerusarema zvikurusa. Uye kunyange boka guru chevapristi chakateerera rutendo.
6:8 Ipapo Stephen, vakazadzwa nenyasha uye kushinga, akaita zviratidzo nezvishamiso pakati pavanhu.
6:9 Asi vamwe, kubva musinagoge vanonzi Libertines, uye Cyrenians, uye nevaArekisandira, uye vaya vaiva vokuKirikiya Asia akasimuka uye vakanga vachikakavadzana naSitefano.
6:10 Asi vakanga vasingagoni kupikisa uchenjeri neMweya waaitaura nawo.
6:11 Ipapo vakapa pfumbamuromo varume vaiti vakanga kunomhangara kuti vakanga vakamunzwa achitaura mashoko ekumhura potera Mozisi naMwari.
6:12 Vakaitirwa saizvozvo kumutsa vanhu nevakuru nevanyori. Uye akakurumidza pamwe, vakamubata vakamuuisa kudare remakurukota.
6:13 Vakaisa zvapupu zvenhema, uyo akati: "Munhu uyu haamiri kutaura mashoko anomhura pamusoro penzvimbo iyi tsvene nemurairo.
6:14 Nekuti tamunzwa achiti uyu Jesu wokuNazareta achaparadza nzvimbo ino uye uchashandura tsika, dzatakapiwa naMosesi kwatiri. "
6:15 Uye vose vakanga vagere pamakurukota, akanyatsomutarira naye, vakaona chiso chake, sokunge rakanga rava sechiso Angel.
8:1 Zvino mumazuva iwayo, kwakava kutambudzwa kukuru pamusoro Church paJerusarema. Uye vose takaendeswa dzeJudhiya neSamariya, kunze vapositori.
8:2 Asi Mwari vaitya vanhu akaronga rwaStefani mariro, uye vakaita nokuchema kukuru pamusoro pake.
8:3 Zvino Sauro wakange arere tsvina kuChechi nokupinda yose dzimba, achikakata kure varume nevakadzi, uye nokuita kuti mutirongo.
8:4 saka, vaya vakanga vapararira vaifamba kumativi, rouevhangeri Shoko raMwari.
8:5 zvino Firipi, achiburuka paguta reSamaria, akanga achiparidza Kristu kwavari.
8:6 Zvino vazhinji vakateerera akanyatsomutarira uye nemoyo umwe kune izvo vari zvakataurwa naFiripi, uye vakanga vakarinda zviratidzo zvaakanga achiita.
8:7 Nokuti vazhinji vavo vaiva nemidzimu isina kuchena, uye, akadanidzira nenzwi guru, izvi akabva kwavari.
8:8 Uye vazhinji mitezo uye vakanga vakaremara vakarapwa.
8:9 saka, Pakava nomufaro mukuru muguta iro. Zvino kwakanga kuno mumwe murume ainzi Simoni, vaimboita akanga n'anga muguta iroro, vachinyengera vanhu veSamaria, vanozviti amene kuva munhu mukuru.
8:10 Uye kune vose avo vanoda kuteerera, kubva kuvaduku kusvikira kuvakuru, akanga achiti: "Heuno simba raMwari, unonzi mukuru. "
8:11 Uye vakanga dzakateerera nokuti, kwenguva refu, akanga tisanyengerwa navo mashiripiti ake.
8:12 Asi zvechokwadi, kamwe vakanga vatenda Firipi, akanga evhangeri yeushe hwaMwari, varume nevakadzi vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu.
8:13 Simoni pachake akatenda uye akabhabhatidzwa uye, wakati abhabhatidzwa, iye vakanamatira Philip. Saka zvino, achiona zvakare mukuru zviratidzo nezvishamiso vari vachibata, akashamiswa uye akashamiswa kwazvo akatanga.
8:14 Zvino vaApostora vaiva paJerusarema vakati vanzwa kuti Samaria yagamuchira Shoko raMwari, vakatumira Petro naJohani kwavari.
8:15 Vakati vasvika, ivo vakavanyengeterera, kuti vagamuchire Mweya Mutsvene.
8:16 Nokuti akanga asati asvika pakati pavo, sezvo vakanga vangobhabhatidzwa muzita raIshe Jesu.
8:17 Ipapo vakaisa maoko avo pamusoro pavo, uye vakagamuchira Mweya Mutsvene.
8:18 Asi kana Simoni vaona kuti, kubudikidza nokuiswa maoko AVAPOSTORI, Mweya Mutsvene waipiwa, akavapa mari,
8:19 vachiti, "Ndipei simba ichi kwandiriwo, saka kuti chero wandinenge ndanzwira maoko angu, agamuchire Mweya Mutsvene. "Asi Petro akati kwaari:
8:20 "Regai mari yako kuva newe kundoparadzwa, nokuti vakafunga kuti chipo chaMwari kuti vave nokugarwa mari.
8:21 Hapana chikamu kana nzvimbo panyaya iyi. Nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari.
8:22 uye saka, tendeuka kubva ichi, wako zvakaipa, uye kukumbira Mwari, saka kuti zvichida urongwa ichi mumwoyo mako kuti ukanganwirwe iwe.
8:23 Nokuti ndinoona kuti uri munduru inovava, uye musungo weuipi. "
8:24 Zvino Simoni akapindura akati, "Ndinyengetererei kuna She, zvokuti hapana kwezvawataura zvamataura chingaitika kwandiri. "
8:25 uye zvirokwazvo, pashure akapupura kutaura Shoko raShe, vakadzokera kuJerusarema, uye ivo evhangeri kumatunhu vaSamariya vazhinji.
8:26 Zvino mutumwa waIshe wakataura kuna Firipi, vachiti, "Simuka uende zasi, kuti nzira iyo anoburukira kubva kuJerusarema kupinda Gaza, apo pane irenje. "
8:27 Uye asimuka, akaenda. uye tarira, muItiopiya murume, muchekwa, simba pasi Candace, mambokadzi vaItiopia, waivona pfuma yake yose, akanga asvika kuJerusarema kuzonamata.
8:28 Uye paakanga achidzokera, akanga agere pamusoro mungoro yake achiverenga kubva kuna Isaya muprofita.
8:29 Ipapo Mweya ndokuti kuna Firipi, "Swederai pedyo uye kubatana pachako pangoro iyi."
8:30 Firipi, akakurumidza, akamunzwa achiverenga kubva kuna Isaya muprofita, uye akati, "Unofunga kuti iwe unzwisise zvauri kuverenga?"
8:31 Akati, "Asi sei I anogona, kana munhu achange mukazvizarurira kwandiri?"Uye akakumbira Firipi kuti kwakuka uye agare naye.
8:32 Zvino nzvimbo muMagwaro kuti aiverenga ichi: "Segwai akatungamirirwa kunourayiwa. Uye segwayana rinyerere pamberi pemuvevuri waro, saka haana kushamisa muromo wake.
8:33 Akatsungirira mutongo wake nokuzvininipisa. Ndiani vezera rake vanofanira kutsanangura sei upenyu hwake hunobviswa panyika?"
8:34 Ipapo mukuru akapindura Firipi, vachiti: "Ndinokukumbira, nezvake ndiye muporofita achiti ichi? About pachake, kana pamusoro mumwewo?"
8:35 Zvino Firipi, kuvhura muromo wake akatanga parugwaro urwu, evhangeri Jesu kwaari.
8:36 Uye pavakanga vachifamba munzira, vasvika imwe mvura mabviro. Muchekwa ndokuti: "Pane mvura. Chii vaizotadzisa kubhabhatidzwa?"
8:37 Zvino Firipi akati, "Kana uchitenda wako wose, zvinonzi akabvumira. "Iye akapindura akati, "Ndinotenda Mwanakomana waMwari Jesu Kristu."
8:38 Akarayira kuti ngoro imiswe. Uye vose vari vaviri, Firipi nemuchekwa akaburuka mumvura. Uye akamubhabhatidza.
8:39 Uye vakati huchibva mvura, Mweya waShe wakatora Firipi pakarepo, uye muyunaki haana kuzomuonazve. Akabva akaenda nenzira yake, vachifara.
8:40 Zvino Firipi wakawanikwa paAshidhodhi. Uye kupfuurira mberi, iye evhangeri pamaguta ose, kusvikira asvika kuKesaria.
9:1 zvino Sauro, achiri kufema kutyisa kurohwa pamusoro vadzidzi vaShe, akaenda kumupristi mukuru,
9:2 iye kumuteterera tsamba kumasinagogi aiva muDhamasiko, kuti, kana awana chero varume kana vakadzi kuva Way ichi, aigona avatungamirire sevasungwa kuJerusarema.
9:3 Uye sezvo aita rwendo, zvakaitika kuti akanga kusvika muDhamasiko. uye pakarepo, chiedza chakabva kudenga chikamupenyera kumativi ose kwaari.
9:4 Uye akawira pasi, akanzwa inzwi richiti kwaari, "Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei?"
9:5 Akati, "Ndiwe ani, tenzi?"Zvino: "Ndini Jesu, waunotambudza. Zvakaoma kuti ukave Chibayiso. "
9:6 Zvino, Achidederawo nekushamisika, akati, "Ishe, unoda kuti ndiite sei?"
9:7 Zvino Ishe akati kwaari, "Simuka upinde muguta, uye ikoko uchaudzwa zvaunofanira kuita. "Zvino varume vakanga vaimuperekedza vakamira akashamiswa kwazvo akatanga, kunzwa zvirokwazvo inzwi, asi vasingaoni munhu.
9:8 Ipapo Sauro akasimuka kubva pasi. Uye pamusoro kuzarura maziso ake, akaona chinhu. Saka Saka vakamubata ruoko, vakauya naye Dhamaseko.
9:9 Uye panzvimbo iyoyo, akanga asina nemazuva matatu, uye haana kudya kana kunwa.
9:10 Zvino pakange pane umwe mudzidzi paDhamasiko, ainzi Ananiasi. Zvino Ishe akati kwaari muchiratidzo, "Ananiasi!"Akati, "Ndiri pano, Ishe. "
9:11 Zvino Ishe akati kwaari: "Simuka uende munzira kuti inonzi Yakarurama, uye tsvaka, mumba maJudhasi, uya ainzi Sauro weTaso. nokuti tarisai, ari kunyengetera. "
9:12 (Zvino Pauro akaona mumwe murume ainzi Ananiasi achipinda uye nokuisa maoko pamusoro pake, kuti aonezve.)
9:13 Asi Ananiasi akapindura: "Ishe, Ndakanzwa nevazhinji pamusoro pomurume uyu, sei zvakaipa zvaakaitira vatsvene venyu muJerusarema.
9:14 Uye ane simba pano kubva vakuru vavapristi, kusunga vose anzwirwe zita renyu. "
9:15 Zvino Ishe akati kwaari: "Enda, nokuti iyeyu ndiye mudziyo wakasarudzwa kwandiri kubudisa zita rangu pamberi pevahedheni nemadzimambo uye vanakomana vaIsraeri.
9:16 Nokuti ndichaita kumuzarurira sei anofanira kutambudzika nokuda kwezita rangu. "
9:17 Zvino Ananiasi wakaenda. Uye akapinda mumba. Uye achiisa maoko ake pamusoro pake, akati: "Muzvarwa Sauro, Ishe Jesu, iye akazviratidza kwauri munzira yawakauya nayo yasvika, andituma kuti iwe kuti uonezve uye uzadzwe neMweya Mutsvene. "
9:18 uye pakarepo, zvakaita sokuti mafunurwa ichiwira pamaziso ake, uye rikaonazve. Uye asimuka, akabhabhatidzwa.
9:19 Zvino wakati atora zvokudya, akasimbiswa. Zvino akanga nevadzidzi vaiva paDhamasiko mamwe mazuva.
9:20 Uye akanga akaramba achiparidza Jesu mumasinagogi: kuti iye ndiye Mwanakomana waMwari.
9:21 Uye vose vakamunzwa vakashamiswa, uye vakati, "Ko, uyu haasi iye, muJerusarema, akanga vachirwa avo kushandisa zita iri, uye vaiuya pano ichi: kuti avatungamirire kuenda vakuru vavapristi?"
9:22 Asi Sauro wakange vachiwedzera yakakura zvikuru mano, uye saka akavhiringidza vaJudha vaigara paDhamasiko, kubudikidza anosimbisa kuti ndiye Kristu.
9:23 Zvino mazuva mazhinji apera, vaJudha vakarangana somunhu, kuitira kuti vamuuraye.
9:24 Asi kunyengera kwavo chikazikamwa Sauro. Zvino vakanga vakanyatsomutarira masuo, masikati nousiku, kuitira kuti vamuuraye.
9:25 Asi vadzidzi, akamuburusa usiku, akamutumira pamusoro porusvingo nokubvumira naye pasi mudengu.
9:26 Zvino wakati asvika kuJerusarema, akaedza kubatana nevadzidzi. Vakashamisika vose vaimutya, vasingatendi kuti akanga ava mudzidzi.
9:27 Asi Bhanabhasi akamutora padivi uye akamutungamirira kuvaapositori. Uye akavatsanangurira kuti wakaona Ishe, uye kuti akanga ataura naye, uye sei, muDhamasiko, akanga aita nokutendeka muzita raJesu.
9:28 Uye akanga navo, achipinda uye kuenda Jerusarema, uye vakatendeka muzita raIshe.
9:29 Naiyewo akanga achitaura nevahedheni uye nharo vaGiriki. Asi vakanga vachitsvaka kumuuraya.
9:30 Zvino hama dzakanga akaziva izvi, vakauya naye kuna Kesariya uye akamuendesa kuTaso.
9:31 zvechokwadi, Chechi yakanga norugare yose muJudhiya mose nomuGarireya nomuSamariya, uye yakanga kuvakwa, apo tichifamba mukutya Ishe, uye rakanga muzere kunyaradzwa Mutsvene.
9:32 Zvino zvakaitika kuti Petro, sezvo akaenda kumativi kwese, akasvika kuvatsvene vaigara paRidha.
9:33 Asi Akawanapo umwe munhu, ainzi Eniasi, uyo aiva akafa mitezo, akanga akavata panhovo makore masere.
9:34 Zvino Petro akati kwaari: "Eniasi, Ishe Jesu Kristu anokuporesa. Simuka vatange mubhedha wako. "Pakarepo akasimuka.
9:35 Uye vose vaigara muRidha nomuSharoni naye, uye vakanga vatendeuka kuti Ishe.
9:36 Zvino paivapo paJopa umwe mudzidzikadzi wainzi Tabhita, umo shanduro rinonzi Dorcas. Akanga akazadzwa mabasa akanaka uye almsgiving kuti iye achiita.
9:37 Zvino kuti, mumazuva iwayo, iye akarwara ndokufa. Vakati vamushambidza, vakamuradzika muimba yepamusoro.
9:38 Zvino kubva Ridha zvarakange riri pedo neJopa, vadzidzi, pavakanzwa kuti Petro wakange aripo, vakatuma varume vaviri kwaari, vachimubvunza: "Regai kunonoka kuuya kwatiri."
9:39 Ipapo Petro, akasimuka, akaenda navo. Zvino wakati asvika, vakaenda naye yepamusoro. Uye chirikadzi dzose vakanga vamire vakamupoteredza, nokuchema kuratidza kwaari majasi uye nguo kuti Dhokasi akanga aita navo.
9:40 Zvino vose vakanga vatumwa panze, Peter, akapfugama, akanyengetera. Uye kumutumbi, akati: "Tabitha, muka. "Iye akasvinura meso ake, uye, paaizoona Peter, akagara zvakare.
9:41 Uye kupa kwake ruoko rwake, Iye akavamutsa. Zvino wakati akadana vatsvene nechirikadzi, akamuisa pamberi pavo achirarama.
9:42 Zvino izvi zvikazikamwa yose reJopa. Uye vazhinji vakatenda munaShe.
9:43 Zvino kuti akagara mazuva mazhinji paJopa, neumwe Simoni, musukuti wematehwe.
10:1 Zvino kwakanga kuno mumwe murume muKesariya, ainzi Koniriasi, mukuru wezana weHondo Boka rinonzi Italian,
10:2 murume akanga akazvipira, anotya Mwari pamwe neimba yake yose, kupa zvakawanda zvipo kuvanhu, uye ndichinyengetera kuna Mwari nguva dzose.
10:3 Uyu murume akaona muchiratidzo pachena, nenguva inenge yepfumbamwe yezuva, mutumwa waMwari achipinda kwaari, achiti kwaari: "Koneriyasi!"
10:4 Zvino, akanyatsomutarira naye, wakabatwa kutya, uye akati, "Chii ichochi, tenzi?"Iye akati kwaari: "Minyengetero yako nezvipo zvako almsgiving zvakwira kuva chirangaridzo pamberi paMwari.
10:5 Saka zvino, tuma varume kuJopa, + ndoshevedza mumwe Simon, unonzi Petro.
10:6 Uyu murume Mueni neumwe Simoni, musukuti wematehwe, ane imba iri pedyo negungwa. Iye achakuudza zvaunofanira kuita. "
10:7 Zvino mutumwa akanga achitaura naye akati aenda, akadana, kubva vaya vaiva pasi pake, vaviri vevaranda vake vemumba musoja aitya Jehovha.
10:8 Zvino wakati arondedzera zvinhu zvose kwavari, akavatuma kuJopa.
10:9 ndokubva, zuva rakatevera, pavakanga vachienda, uye voswedera pedyo neguta, Peter akakwira makamuri okumusoro, kuti anyengetere, panguva inenge yechitanhatu.
10:10 Uye sezvo akanga nzara, aida kuva zvokudya. ndokubva, sezvo vakanga vachigadzirira nayo, muchiyeverwa mupfungwa akawira pamusoro pake.
10:11 Iye ndokuona denga rakazaruka, uye neumwe mudziyo uchichiburukira, sokunge mucheka jira zvikuru unoburuswa, mana ayo, kubva kudenga panyika,
10:12 pamusoro vose nemhuka dzine makumbo mana, uye pezvinokambaira zvenyika uye zvinobhururuka zvinhu dzedenga.
10:13 Uye inzwi rakauya kwaari: "Simuka, Peter! Baya udye. "
10:14 Asi Petro akati: "Ngazvive kure neni, tenzi. Nekuti handina kutongodya chero chinhu chisakachena kana chine tsvina. "
10:15 Uye inzwi, zvakare kechipiri kwaari: "Chii Mwari akanatsa, iwe usadana chakasviba. "
10:16 Zvino izvi zvakaitwa kusvikira katatu. Pakarepo mudziyo akatorwa akakwidzwa kudenga.
10:17 Zvino Petro paakanga achiri kutaura mukati make kuti chii zvaakaratidzwa, chaakanga aona, kungareva, tarira, varume vakanga vatumwa kubva kuna Koneriyo akamira pagedhi, kubvunzana pamusoro imba yaSimoni.
10:18 Uye vakati vadanira kunze, vakabvunza kana Simoni, unonzi Petro, aiva mueni nzvimbo.
10:19 ndokubva, Petro akanga achifunga nezvechiratidzo, Mweya akati kwaari, "Tarirai, Varume vatatu tsvakai iwe.
10:20 uye saka, simuka, buruka, uende navo, asingakahadziki chinhu. Nokuti ndini ndavatuma. "
10:21 Ipapo Petro, nokuburuka kuvanhu, akati: "Tarirai, Ndini munhu wamunotsvaka. Ndechipi chikonzero icho wasvika?"
10:22 Vakati: "Koneriyasi, wezana, murume uye anotya Mwari chete, ane kupupurirwa zvakanaka rudzi rwose vaJudha, akagamuchira shoko kubva Angel mutsvene kudaidza kumba kwake iwe uye kuteerera mashoko kubva kwamuri. "
10:23 saka, achivatungamirira, akavagamuchira sevaeni. ndokubva, tichitevera zuva, akasimuka, Akagadzawo navo. Uye dzimwe hama dzokuJopa dzakaendawo naye.
10:24 Pazuva rakatevera, Akasvika kuKesaria. uye zvechokwadi, Koniriasi akanga akavamirira, wakadanira pamwe mhuri yake uye shamwari dzepedyo.
10:25 Zvino kuti, apo Petro akanga apinda, Koneriyasi akandosangana naye. Uye akawira patsoka dzake, iye vaitya.
10:26 Asi zvechokwadi, Peter, nokusimudza akamukwidza, akati: "Simuka, Nekuti neniwo ndiri chete munhu. "
10:27 Uye kutaura naye, akapinda, uye akawana vazhinji vakanga vakaungana.
10:28 Akati kwavari: "Munoziva zvinonyangadza zvingava munhu muJudha kuti pamwe vakabatana, kana kuti kuwedzerwa, kuvatorwa. Asi Mwari akaratidza mangu kuti hapana munhu haana kunaka kana kuchena.
10:29 Nokuda kwaizvozvi uye pasina mubvunzo, Ndakabuda kana akashevedza. saka, Ndinokukumbira iwe, nokuti chii chikonzero vane iwe wandidana?"
10:30 Koneriyo ndokuti: "Hazvina ikozvino zuva rechina, kuti panguva ino, sezvo ndakanga ndichinyengetera mumba mangu nenguva yepfumbamwe,, uye tarira, murume wakamira pamberi pangu ane chena vestment, uye akati:
10:31 'Cornelius, munyengetero wako wanzwikwa uye almsgiving yako yave arangarirwa pamberi paMwari.
10:32 saka, tumai kuJopa uye udane Simoni, unonzi Petro. Uyu murume Mueni mumba maSimoni, musukuti wematehwe, pedyo negungwa. '
10:33 uye saka, I pakarepo akatuma kwamuri. Uye maita zvakanaka kuuya kuno. saka, tose zvino chipo pamberi penyu kuti unzwe zvose zvakadzidziswa kwamuri naJehovha. "
10:34 ndokubva, Peter, muromo wake, akati: "Ini vakagumisa muchokwadi kuti Mwari haasi muremekedzi wavanhu.
10:35 Asi mukati rwose, ani naani anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.
10:36 Mwari akatuma shoko vanakomana vaIsraeri, kuzivisa rugare kubudikidza naJesu Kristu, nokuti ndiye Ishe wavose.
10:37 Munoziva kuti Shoko yave wakaziviswa muJudhiya rose. Nokuti kutanga paGarirea, pashure rubhabhatidzo iyo John aiparidza,
10:38 Jesu weNazareta, uyo Mwari akazodza noMweya Mutsvene uye nesimba, akafamba kumativi achiita zvakanaka uye achiporesa vose vakamanikidzwa nadhiabhorosi. Nokuti Mwari aiva naye.
10:39 Uye isu tiri zvapupu zvezvinhu zvose zvaakaita munyika yeJudhea uye muJerusarema, uyo vakauraya nokumuturika pamuti.
10:40 Mwari akamumutsa nezuva retatu uye akabvumira kuti pachena,
10:41 kwete kuvanhu vose, asi kune nezvapupu kufanoziviswa naMwari, kune avo vedu takadya uye tikanwa naye shure amuka kuvakafa.
10:42 Uye akarayira kuti tiparidze kuvanhu, uye tipupure kuti ndiye uya akagadzwa kuti ave mutongi wevapenyu nevakafa naMwari.
10:43 Kwaari zvose Vaprofita kupa uchapupu kuti kubudikidza nezita rake vose vanotenda maari nokugamuchira kuregererwa kwezvivi. "
10:44 Petro achiri kutaura mashoko aya, Mweya Mutsvene akawira pamusoro vose vakanga vachiteerera Shoko.
10:45 Uye wakatendeka vekudzingiswa, vakanga akasvika Peter, vakashamiswa kuti nenyasha Mutsvene akanga akadurura pamusoro pavaHedheni.
10:46 Nokuti vakavanzwa vachitaura nendimi uye vachikudza Mwari.
10:47 Ipapo Petro akapindura, "Munhu aigona sei kurambidza mvura, kuitira kuti vaya vakagamuchira Mweya Mutsvene haana kubhabhatidzwa, sezvo nesuwo kunge?"
10:48 Zvino akavaraira kuti vabhabhatidzwe muzita raIshe Jesu Kristu. Ipapo vakamukumbira kuti agare navo kwemazuva.